Nylon filament factory - Mpanamboatra filamenan'ny nilona China, mpamatsy
PA6 filamenty nylon volom-borona ho an'ny borosy indostrialy na borosy volo
Ny filamenan'ny PA6, ny mahitsy, ny endrika tsara aorian'ny fambolena, ny faharetan'ny vokatra matanjaka, ny fahasitranana haingana aorian'ny famoritana, ary miverina amin'ny endrika tany am-boalohany taorinan'ny fanasana, ny filan'ny PA6 dia maina, malefaka, malefaka ary azo antoka, ary tsy handratra ny tananao amin'ny fampiasana isan'andro.
Ny filamenan'ny PA66 dia azo ampiasaina betsaka amin'ny borosy vilia baolina, borosy borosy, borosy tavoahangy, borosy fanasan-tarehy, borosy fanadiovan-drivotra, borosy fantsona, borosy etona, borosy esory, borosy volo, legioma sy borosy fanadiovan-koditra, borosy barbecue, borosy eyelash, borosy poloney, sns.
Fivarotana mafana nylon filament PA 66 filam-bolo borosy volo
Ny filam-bolo PA66 dia ny tanjaky ny mekanika avo indrindra ary ny be mpampiasa indrindra amin'ny andiany PA. Noho ny kristaly avo lenta, avo ny henjana sy ny fanoherana ny hafanana.
Nylon pa 610 filament nify borosy nify fitaovana
Ny filamatra Pa610 dia iray amin'ireo fitaovana filamenta borosy matanjaka noho ny fanoherana tsara anaovan'izy ireo, ny fanoherana ny havizanana, ny fanoherana ny fiatraikany, ny fanoherana ny volo ary ny fanoherana ny fahanterana.
Varotra filamenta pa610 amidy mafana
Ny famafazana pa610 borosy dia manana tombony amin'ny hakitroky ambany, fidiran'ny rano ambany, fanoherana alkali mahery, fanoherana asidra malemy, fanoherana mahery vaika ary fanoherana ny havizanana, sns. Mety amin'ny borosy indostrialy isan-karazany
Fotory famatsiana PA6 borosy filament
Ny anaran'ny simika PA6 filament dia polycaprolactam monofilament, izay misy polycaprolactam. Izy io dia vokatra somary ara-toekarena amin'ny andiana nylon. Ny isan'ireo fampiharana azy: borosy vilia, borosy vilany, borosy tavoahangy, borosy tarehy, borosy, borosy fandroana, borosy indostrialy sns
paositera boribory filamenta 6
Ny filamenan'ny PA6 no karazana volon'ondry nylon mahazatra indrindra amin'ny indostria borosy. Ny vidin'ny filamentan'ny borosy PA6 dia somary mora vidy, ary manana sentona malefaka izy io. Izy io dia fitaovana filamente borosy izay tena be mpampiasa. Fampiharana fampiharana: borosy vilia, borosy vilany, borosy tavoahangy, borosy fanasan-tarehy sns
0,5mm mangarahara PA6 potika borosy sentetika
Ny filam-bolo PA6 dia manana fananana mekanika tena tsara sy fanoherana ny fiantraikany, fanoherana ny abrasion, fahombiazan'ny mari-pana ambany, fitoniana simika tsara, fanoherana alkali, mora levona amin'ny fenol, toluene, sns., Dia vokatra ara-toekarena ao amin'ny andian'ny nylon